Burma Strange News (Burmese Version): ကျော်သူ သရဲတွေ မွေးမြူထား
ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူသည် နာရေးကူညီမှု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ ကွယ်လွန်သူ လူသေအလောင်းများနှင့် အလွန် ရင်းနှီးကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ရင်းနှီးသည့်အလျောက် ကွယ်လွန်သူများ သရဲ ဖြစ်သွားသည့်အခါ သရဲများကို လစဉ် လကွယ်နေ့တိုင်း သရဲ အစာကျွေးလျက် သရဲများ ကို မွေးမြူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သရဲမွေးမြူနေရသဖြင့် သရဲများ ရိုသေစိမ့်သောငှာ ကျော်သူသည် ဘိုးတော် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်လျက် နှုတ်ခမ်းမွေး မုတ်ဆိတ်မွေးများ ထားရှိသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။
ထိုသို့ သရဲများမွေးမြူထားပြီး ထိပ်စီး ဘိုးတော် ဖြစ်နေသော ကျော်သူကို မည်သူမျှ မဖမ်းဆီးရဲကြကြောင်း ဆက်လက် စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ကတုံးတုံးထားပြီး ဘိုးတော် သိဒ္ဒိနှင့် မပြည့်စုံသော ကျော်သူ့ သူငယ်ချင်း ဇာဂနာမှာ မူကား ဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရပါသည်။
Posted by BS News at 1:30 AM
ATTENTION TO BLOG OWNER
Why do you post impossible events?
Anonymous November 24, 2010 at 4:00 PM
စောက်အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ စောက် ဘလော့ မှာ
စောက်ပေါက်ကရရေးလို့ မအေလိုး အခါတစ်သိန်းကွာ
Anonymous November 25, 2010 at 8:01 AM
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ...ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် ရူးများ ရူးသွားပြီလား ဆရာတို့ရယ်...တိန်
Anonymous November 25, 2010 at 11:31 PM
အော ... သူများ ကုသိုလ် အလုပ် မှာ သူက အကုသိုလ် အယူကောင်းနေလေရဲ့ ...
james November 26, 2010 at 3:09 AM
Zaw Zaw Aung November 26, 2010 at 3:19 AM
၁း၁။ ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် ဒီဆိုက်လေးက လက်ရှိဗမာပြည်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဟာသလေးနှောပြီး စေ့စေ့တွေး ရေးရေးပေါ်အောင် လုပ်ထားသည်လို့ မြင်မိပါတယ်။
၁း၂။ Post-modern News ဆိုတော့… ဆိုလိုရင်းသိအောင် နဲနဲတော့ brain storming လုပ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
၂း၁။ ကိုကျော်သူဟာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ.. ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်...
တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်သွားသူများကို သူရဲ.. သူရဲကောင်း ဟုခေါ်ကြောင်း.. အဘိဓာန်မှာပါပါတယ်။
၂း၂။ ဒီတော့ သူရဲကောင်း ကိုကျော်သူ့နောက်မှာ သူရဲတွေ...သူရဲကောင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ.... (ဒီအချက်ကို ဒီပို့စ်လေးက ထောက်ပြထားတာလားလို့ ပိုစ်မော်ဒန် အတွေးနဲ့ တွေးမိတယ်)
မကြာခင်ကပဲ မင်းသား လွင်မိုးဘာလုပ်သွားသလဲ လူတိုင်းသိ၊ ဟာသ သရုပ်ဆောင် သရဲလေးကောင်က ဘာကြေညာသလဲ လူတိုင်းသိ၊ သရဲလေးကောင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ လွင်မိုးကို ဆန့်ကျင်ပြီး..... ကိုကျော်သူ့ကို ထောက်ခံကြောင်း သဘောသက်ရောက်.... (ဒါကိုလဲ ဒီပို့စ်လေးက ဆိုလိုနိုင်တယ်)..
၄း၁။ ပြီးတော့ ... ကိုဇာဂနာ့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို အမှတ်ရ သတိပြုမိအောင် ဖော်ပြပေးယင်း.... ကိုကျော်သူ့ကို အဲဒီအခြေအနေမျိုးက ကင်းလွတ်စေကြောင်း သတိပေးတာ ဖြစ်နိုင်သလို....
၄း၂။ သူရဲကောင်း ကိုကျော်သူနဲ့ သူ့ရဲ့ …သူရဲတွေ.. သူရဲကောင်းတွေ ရှိနေသ၍... ဘယ်သူမှ လာထိရဲမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလဲ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
၅းဝ။ သရဖူ မဂ္ဂဇင်းခေတ်တုန်းက ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာတွေကို ဆရာ သစ္စာနီက ပြန်ရှင်းပြရတာ မှတ်မိနေပါတယ်…..
Anonymous November 26, 2010 at 5:04 PM
အော... လက်စသတ်တော့ ဒီလိုကိုး။
Shanghtin November 26, 2010 at 5:59 PM
i like this guy keep it up man you are funny baster as hell but nice post.. very interesting
ဟီးဟီး။ ရီရတယ် :)
Yes , you are in need
မင်းသူကျော် December 2, 2010 at 5:37 PM
ဟုတ်ပါတယ် ပိုစ်မော်ဒန် အတွေးနဲ့ မရင်းနှီရင် အဲဒီါလ်ုထင်ရပါတယ် ကိုကျော်သူကိုမကောင်းပြောသလို....
ကောင်းပါတယ် ကိုဇော်ဇော်အောင် ရှင်းပြတဲ့ အတွေးလေးတွေ.....
correct zaw zaw aung!
Anonymous December 4, 2010 at 2:57 PM
ကိုဇော်ဇော်အောင်ရှင်းပြထားတာလေး အတော်ကောင်းပါတယ်။ တချို့ လူတွေက ဥာဏ်လေးတစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ ဆဲဖို့ လောက်သာသိတဲ့ ချီးဦးနှောက်တွေ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဝင်ဖတ်လို့ရနေတဲ့ဒီလို နေရာမျိုးမှာအဲလိုမျိုးကြီး ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် မဆဲဆိုသင့်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ် .................
အရမ်းကို လိုအပ်ပြီးရှိသင့်တဲ့ ဘလောက် တခုလို့ မြင်မိပါတယ်
ဖတ်သမျှ ဆိုဒ်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ များများတင်ပေးပါအုံး
ဟေ့ကောင်.. ငါလိုးလေး.. လီးမို့ လို့ လျှောက်တင်နေတာလား.. သတင်းတင်မယ်ဆိုလဲသေချာတင်.. မအေလိုးရ.. လီးလို.. လျှောက်တင်နေတယ်.. ငါလိုးမသား
မင်းအမေ ကို ဖင်ချခံရလို့ လား.. ဒီလိုလျှောက်တင်တာက :/ မအေလိုးလေး
Aww taw taw yine det kg dwe,,, balo mi ba ga mwe lar tha lal ? gentlemen so ma yine ya bu: thadi pyu bar... Myanmar hman yin , yin jay: ya dal...
Anonymous February 15, 2011 at 3:08 AM
ကြည့်ရတာ ဒီကောင်က တော်တော် အုပ်ထိန်းမှုလိုအပ်နေပုံရတယ် ရပ်ကွက်ထဲက အကျင့်စရိုက်လို့ပြောရင်လည်း ရပ်ကွက်က လူတွေကို ထိခိုက်ဦးမယ် လမ်းဘေးစရိုက်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်လို့ထင်တယ် ဒီလိုကိစ္စတွေ ဒီလိုအဖြစ်တွေဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှသိတာဆိုတော့ ကြည့်ရတာ သူကြုံဖူးပုံရတယ် အမိယုတ်တော့ နှုတ်ကြမ်းဆိုတာလိုပေါ့
i like myanmar army. i don't want n.l.d...myanmar army is protection we. n.l.d is what good for we.
ဟုတ်ပ..ကျော်သူကလည်းကျော်သူပေပဲ..အိုဗာအက်ရှင်တွေဖြစ်ပြီး သရဲ ပုံပေါက်နေတယ်..ဟိဟိ
ဆင်မလိုက်သားဂလဲ April 17, 2011 at 2:04 AM
myanmar army is protection we....n.l.d is what good for we..... အဲဒီလိုရေးရမယ်လို့ဘယ်သူသင်ပေးထားတာလဲ..myanmar army ကသင်ပေးထားတာလား...စာတတ်အောင်သင်ပြီးမှ english လိုလာကြွား...စစ်ခွေးဆိုတာ.နဲ့အမြီးနှံ့ မနေနဲ့သားကြီး..မင်းကိုကြည့်ရတာ..စစ်တပ်ထဲကကောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်..နောက်ဆိုရင်စာအုပ်စာပေများများဖတ်ပေးကြားလား... စာတတ်တဲ့လူကိုမေးပြီးမှ english လိုရေး..ကြားလား..
နောက်ကိုများများတင်နိုင်အောင်လည်းကြိူးစားပေးပါ ။ အားပေးပါတယ်။လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ
sailay July 7, 2011 at 5:00 PM
ကျော်သူ ကို လူတိုင်းက ချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ ဒါလူတိုင်း မငြင်းနိုင်။
ဒါကို မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့။ သားပုတ် လေလွင့် အောက်တန်းကျတဲ့ အတင်း
အဖျင်း တွေနဲ့ အချိန် မဖြုန်ပါနဲ့။ မင်း ရဲ့ မိဘတွေက သင်မပေးဘူးလား။
မင်းကို ငါ သနား ပါတယ်။လူဖြစ်အောင် ကြိုး စားပါကွာ။မသိရင် သင်ယူပေါ့ကွါ။
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ဦးကျော်သူက လူကိုလူ လို့မြင်တဲ့ မဟာကရုဏာရှင်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ဦးကျော်သူကို ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ က အတုယူရမယ်ဗျ